Malunga nathi -Yueqing Junwei Electric Co., Ltd.
Yueqing JUNWEI Electrical Co., Ltd., ibekwe kwibala elihle leeholide leNtaba iYandang eShanxi, umlambo olwandle oluseMpuma China, okwindlela yamazwe angama-104, yimizuzu engama-20 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iWenzhou ngemoto, ulwandle nomoya Ukuhamba kulunge kakhulu, iseti yophando lwenzululwazi, uphuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa, yenye yamashishini edibeneyo-esitokhwe.
Le nkampani icacisiwe kwimveliso ye: i-relay ye-thermal, i-contactor, i-breaker (uhlobo lweplastiki), i-starter, i-breaker breaker, i-motor protector kunye nezinye iimveliso. Njengoyilo lwembonakalo yemveliso, isitayile esikhethekileyo, imigca egudileyo, intle kwaye inesisa. Inxalenye yokudibanisa ngokungqinelana nokubekwa emgangathweni, iyunivesi eyomeleleyo, inokutshatiswa, ukusebenza kunye nolwakhiwo kuyo okanye okungcono kunemigangatho efanelekileyo yoshishino, uluhlu lwemveliso, umgangatho, ukusebenza okuzinzileyo, ezinye iimveliso zinokutshintsha ngokupheleleyo iimveliso ezingenisiweyo, inkampani izixhobo eziphambili, Itekhnoloji evuthiweyo inezixhobo zokufumana ulwazi lwasekhaya kwimveliso Ukuthembeka kwemveliso kubonelela ngesiqinisekiso esisisiseko.
Bambelela kumxholo wento entsha, ulawulo lwezinto ezintsha kunye nokudityaniswa kwetekhnoloji, ukukhuthaza ngokufanelekileyo ukukhula okuzinzileyo. Inkampani yemidlalo iya kuba njengangaphambili kwindlela yokuyila ehamba ngamasebe ahlukeneyo, isikhundla ngasinye sokuphuculwa okuqhubekayo kunye nokuyila, ukuze umgangatho wemveliso yenkampani, inqanaba lolawulo, izibonelelo zoqoqosho kunye nomgangatho ngokubanzi ube kukukhuthaza okunesiqhamo. Kufuneka igxininiswe, ulawulo kufuneka luqwalasele ukusebenza kakuhle; ukuphucula ukusebenza kakuhle, ukunciphisa iindleko zemveliso; ukuthengisa ukugxila kuphuhliso lwabathengi abaphezulu; Itekhnoloji kumgangatho ozinzileyo kunye nokukhawulezisa uphando kunye nophuhliso lweemfuno zentengiso yemveliso entsha.
Inkampani ihlala ifumana umgangatho wodidi lokuqala, inkonzo yeklasi yokuqala, igama lodidi lokuqala kunye nabathengi bethu kunye, sebenza kunye, sebenzani kunye ukwenza iplani enkulu.